८६ हजारको आरडीटी र ४६ हजारको पीसीआर परीक्षण - Everest Dainik - News from Nepal
८६ हजारको आरडीटी र ४६ हजारको पीसीआर परीक्षण
काठमाडौंः सरकारले कोरोनाको सङ्क्रमण फैलन नदिन परीक्षणको दायरा बढाउँदै लगेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पीसीआर विधिबाट कूल ४५ हजार ९५७ परीक्षण गरिएको छ । यस्तै आरडीटी विधिबाट ८६ हजार २३५ परीक्षण गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै ३ हजार ४९४ र आरडीटी विधिबाट ४ हजार ११९ परीक्षण भएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार प्रदेशगत आधारमा प्रदेश नं १ मा १० हजार १६९, प्रदेश नं २ मा छ हजार ३०८, वाग्मती प्रदेशमा २१ हजार ७१२, गण्डकी प्रदेशमा सात हजार ७०१, प्रदेश नं ५ मा ११ हजार ४८९, कर्णाली प्रदेशमा नौ हजार ३९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १९ हजार ८१७ जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस र्‍यापिड टेस्टमा पोजिटिभ र पीसीआरमा नेगेटिभ किन देखिन्छ ?
आइसोलेसनमा रहेकाको सङ्ख्या ५०८ रहेको छ । प्रदेश नं १ मा ६०, प्रदेश नं २ मा १६६, वाग्मती प्रदेशमा २२, गण्डकी प्रदेशमा तीन, प्रदेश नं ५ मा २४७, कर्णाली प्रदेशमा एक र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९ जना रहेका छन् । यस्तै कोरोनालाई जितेर घर फर्कनेको सङ्ख्या ७० रहेको छ ।
याे पनि पढ्नुस काभ्रेमा २ जनामा र्‍यापिड टेष्ट गर्दा ‘पोजेटिभ’
पछिल्लो २४ घण्टामा ७०८ जनाले मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको वेबपेज र एपमा मात्रै ७०८ जनाले आफ्नो विवरण भरेका छन् । सो विवरण भर्नेमा ५ जना रेड जोनमा परेका छन् । रेड जोनमा परेकाको जाँच पड्ताल शुरु गरिसकिएको प्रवक्ता डा. देवकोटाले जानकारी दिए । उनका
अनुसार हालसम्म एप र वेब पेजमा विवरण भर्नेको सङ्ख्या ४७ हजार ९६९ पुगेको छ ।
ट्याग्स: आरडीटी, पीसीआर